Diiwaanka Cunnooyinka - VIP Truffles
Bogga ugu weynrasiidhada
Cunnooyinka madow ee loo yaqaan 'truffle truffle', waxaad dhahdaa kuwa madow ee Périgord
Waqtiga diyaarinta: 5 daqiiqo Waxyaabaha ay ka kooban tahay 6 qof 1 xabo oo toon yar 300 garaam oo saliid madow oo mug leh 2 qaado oo koofiyad ah 2 sentimitir oo liin dhanaan ah 5 centilitir oo saliid saytuun ah oo taraafikada madow Isku diyaari dhamaan maaddooyinka ilaa laga helo nooc saafi ah oo isku mid ah. Ku darso rootiga la dubay.
Waqtiga diyaarinta: 5 daqiiqo Waqtiga wax lagu karsado: 10 daqiiqo Waxyaabaha ay ka kooban tahay 6 qof 6 xabbad rocamadour ari ah 5 centilitres oo saliid saytuun ah oo leh casiir dhanaan ah basbaas Caan ah Basbaas 5 berry Fleur de sel leh qashin madow Diyaargareyso foornadaada 180 ° c. Gali jiiska ariga ee 'Rocamadours' ramekin qiyaastii 15 sentimitir oo ballaciisu yahay. Kadib ku dar saliida iyo basbaaska. Dubo 10 daqiiqo at 180 ° C. Isla foornada, ku rushaysaa qanjaruufo ah ...
Waqtiga diyaarinta: 10 daqiiqo + 1 saac daqiiqo oo nasasho ah Waqtiga karinta: 5 ilaa 10 daqiiqo Waxyaabaha ay ka kooban yihiin 6 qof 4 ukun 10 garaam oo ah tarabuug madow 3 tbsp. ilaa s. saliid saytuun ah oo leh casiirka shucaaca 1 tsp. ilaa c. kareem dareere ah oo dhan Fleur de sel oo leh qashin madow oo madow Caano qaanso madoow ah oo ka soo jeeda weelka basbaaska Caddaanka ah ee ka soo baxa mashiinka Diyaargarowga Qiyaas ahaan u jar gawaadhida. Ukunta ku jebi baaquli oo ku garaac. ...
Waqtiga diyaarinta: 15 daqiiqo Waqtiga karinta: 10 daqiiqo Waxyaabaha ay ka kooban yihiin 4 qof 50 cl oo ah kareem dareere dhan 400 g oo ah nooca cusub ee tagliatelle 10 garaam oo ah taraafikada madow Saliid saytuun ah oo leh casiir qashin-qool Fleur de sel oo leh diyaarka madow qabooji kareemka dareeraha ah. Kudar taraafikada madow oo ha ku shubto inta baastadu karinayso. Karsado tagliatelle. Waa inay noqdaan al dente. U diyaari saxan kasta. U qaybi kareemka shucaaca.
Waqtiga Diyaar garowga: 10 daqiiqo Waqtiga nasashada: 72 saac Waxyaabaha ay ka kooban yihiin 4 qof Bri yar oo culeyskiisu yahay 200 g 11 garaam oo ah tarabuunka Diyaargarowga Diyaarintaan waa in la sameeyaa 72 saacadood (3 maalmood) ka hor. U kala jar brie laba qaybood dherer ahaan. U qaybi tartiib-tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah dhinac walba oo ka mid ah qaybta hoose ee briiska Ku duub faashad aluminium ah. Ku rid sanduuq hawo leh oo qaboojiyaha 2 saacadood. Ka bax oo ka tag heerkulka qolka 72…
Mozzarella yaanyo leh shucaac
Waqtiga diyaarinta: 15 daqiiqo Waqtiga karinta: wax karinta Waxyaabaha ay ka kooban tahay 2 qof 2 kubadood oo Bufala mozzarella ah 2 yaanyo wadnaha oo waaweyn nooc hilib ah 100 garaam arugula 2 qaado oo saliid saytuun ah oo leh casiir dhanaan ah 1 nus qaado khal sherry khal Fleur de sel leh truffle truffles Diyaargarow U maydh yaanyada oo jarjar xajmiga qaro weyn ee 0.5 cm. Ku diyaarso rosette ku yaal taarikadaada. U qaybi arugula kahor ...
Ukunta ku xoqday lootada madow
Waqtiga diyaarinta: 10 daqiiqo + 30 daqiiqo oo nasasho Waqtiga karinta: 5 daqiiqo Waxyaabaha ay ka kooban tahay 2 qof 3 ukunta cusub 3.5 garaam oo ah taraafikada madow 2 qaado oo ah kareem culus Dhirta yaryar ee chives (ikhtiyaar) Fleur de sel with truffle madow madow basbaas Caddaan 1 buur oo sabdo ah Saliid yar oo saytuun ah oo leh casiir truffle madow Diyaarinta Ukunta dhaq. Ka dib, aad u taxaddar, ka yeel dalool dusha sare ee labada ukun. In yar ...
Rooti leh subagga lootada
Waqtiga Diyaarinta: 10 Daqiiqo Waqtiga nasashada: 48 h 00 Waxyaabaha ay ka kooban tahay 2 qof 5 garaam oo xamuul ah 50 garaam oo sabdo jilicsan oo jilicsan 6 rooti oo ah rootiga Diyaargarowga Waxaa doorbideysa in la diyaariyo 48 saacadood ka hor. Qiyaastii jarjar shucaaca. Adiga oo isticmaalaya fargeeto, isku dar subagga iyo qashinka. Ku rid ramekin oo qabooji 00 saacadood ka hor intaadan u adeegin. Ku darso rootiga la dubay.